Odayaasha dhaqanka Nugaal oo ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya miyiga u dhaxeeya Nugaal-Sool in ay joojiyaan dagaalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandOdayaasha dhaqanka Nugaal oo ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya miyiga u dhaxeeya Nugaal-Sool in ay joojiyaan dagaalka
September 2, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka hadlayay kulanka odayaasha dhaqanka Nugaal. [Isha Sawirka: Maamulka Gobolka Nugaal]
Garoowe-(Puntland Mirror) Odayaasha dhaqanka gobolka Nugaal ayaa maanta oo Khamiis ah shir ku yeeshay Garoowe, iyagoo ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya miyiga u dhaxeeya gobolada Nugaal iyo Sool in ay si deg-deg ah u joojiyaan dagaalka.
Islaan Ciise Islaan Muuse oo shir-guddoominayay ayaa odayaasha dhaqanka labada dhinacba ka codsaday in dagaal dambe uusan dhicin, lana kala qaado maleeshiyooyinka.
Asbuucyadii u dambeeyay, colaad labo maleeshiyo beeleed ku dhexmartay deegaan daaqsimeedka Saax-maygaag iyo Sangajabiye oo kuyaala xadka Nugaal iyo Sool ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray labada dhinacba.
Injineer Turki ah oo lagu dilay qaarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Nin injineer ah oo u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu dilay qarax ka dhacay Muqdisho galabnimadii Axadda, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka. Injineerka oo walxaha qarxa loogu xiray gaarigiisa ayaa ku qarxay isaga [...]